အမေရိကန် GDP (ပြည်တွင်းအသားတင်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုတန်ဖိုး) အကြိုထွက်ရှိမှု
အမေရိကန် GDP (ပြည်တွင်းအသားတင်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုတန်ဖိုး) အကြိုထွက်ရှိမှုဒေတာကို ၅:၃၀ (MT အချိန်)တွင် ထုတ်ပြန်သွားဖို့ ရှိပါသည်. ယခုဒေတာသည် လွန်ခဲ့သည့် ၂၀၁၆ခုနှစ်နောက်ဆုံးသုံးလပတ်ရဲ့ အမေရိကန်စီးပွားရေးတိုးတက်မှုဒုတိယအကြိမ် အစီရင်ခံစာဖြစ်ပါသည်. ပထမအကြိမ် အစီရင်ခံစာကိုတော့ဇန်န၀ါရီလကထုတ်ပြန်ခဲ့ ပြီး မျှော်မှန်းထားတဲ့ ၂.၂% အောက်လျော့ကျပြီး ၁.၉%သာရှိခဲ့ပါသည်.
ဒေတာအခြေအနေကောင်းမွန်ပါက USDတက်နိုင်ပြီး အခြေအနေမကောင်းမွန်ပါက USDကျနိုင်ပါသည်. USDကို အရောင်းအ၀ယ်လုပ်ဖို့ အချိန်ကောင်းတစ်ခုပါ.